भविष्यमा भविष्यवाणी गर्न सजिलो छ यदि तपाई स्क्रिप्ट मार्फत हेर्नुहुन्छ: एक नोस्ट्राड्रममस बनें: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	20 जनवरी 2019 मा	•6टिप्पणिहरु
यद्यपि भविष्य भविष्यवाणी नोस्ट्रादममस जस्तै मान्छे को ज्योतिष को धेरै ज्ञान संग केहि लाग््छ, वास्तव मा सबै को भविष्य को भविष्यवाणी गर्न सक्छ एक पल्ट जब तपाईं "खेल" कसरि काम गर्दछ। सुरुका लागि, यो अब बुलशिट को सत्य फिल्टर गर्न गाह्रो छ, किनभने यो देखिन्छ कि गोपनीय सेवाहरू मात्र आफ्नो मात्र जेबमा मुख्यधारा मिडिया छैन, तर वास्तवमा सम्पूर्ण वैकल्पिक मिडिया पनि। यसको मतलब यो हो कि जब तपाइँ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को बारे मा जानकारी खोज्नु हो, तपाईंलाई संभवतः एक वैकल्पिक संस्करण को साथ प्रस्तुत गरिनेछ जो मुख्यधारा संस्करण को आलोचना गर्दछ, तर अझै पनि एक प्रकोष्ठ रंग छ।
नियन्त्रित विपक्षीहरूले सिद्धान्तको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो जुन व्यक्तिले तपाईंलाई डबल डिलमा बनाएको आलोचनाको माध्यमबाट भ्रष्टाचारीको जगेडा राखे। यदि विपक्षीहरूले पर्याप्त मात्रामा ठूलो छ भने तपाइँले विस्फोटकलाई त्यस दुई मिट्टीमा उचाल्नुहुन्छ। यसैले स्पष्ट विचार र विशेष गरी स्वतन्त्रता चाहिन्छ। यदि तपाइँ केहि गर्नुहुन्छ भने, अरूको अन्तर्दृष्टि अनुसार सम्भव तुरुन्तै गरौं, तर यो आफैलाई सम्भव छ। बेइमानी केहि पनि नबिर्सनुहोस् र तर्कलाई विचार गर्नुहोस्। इतिहास र धार्मिक लेखहरू अध्ययन गर्न यो विशेष गरी सल्लाह दिइएको छ, कि यो पत्ता लगाउनको लागि कि हाम्रो वास्तविकताले लिपिको अनुसार नियन्त्रित देखिन्छ। एक पटक तपाइँले यो लिपि पहिचान गर्नुभएपछि, तपाई आफैले नोस्ट्राड्रममस बन्नुभयो।
अप्रत्याशित इतिहास झूटाकरण
इतिहासको अध्ययनबाट न केवल तपाईं पत्ता लगाउनुहुन्छ कि सत्य जगतका प्रथाहरूको रूपमा के भन्नाले जर्ज ओवेलले आफ्नो किताबमा वर्णन गरेका छन्; तपाईं यो पनि पत्ता लगाउनुहुन्छ कि संसार गोपनीय रूपमा एक निश्चित रक्तलाइन को द्वारा नियंत्रित गरिएको छ जसले व्यापारियों को रूप मा कार्य गर्न सक्छ, तर वास्तव मा डिस्को मा छ। इतिहास विधानसभा लाइनमा छ र लगातार हाम्रो Trumanshow विश्वव्यापी अवलोकन राख्न को लागी अनुकूल छ।
अनुसन्धानकर्ता माइल मथिस प्रकट न केवल प्रतिभाशाली यथार्थवादी चित्र चित्रकार बन्न सक्छ, तर भौगोलिक शोधमा आधारित ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरूमा उल्लेखनीय ताजा तरिकामा अनुसन्धान पनि गर्दछ। यसको अर्थ उहाँले ऐतिहासिक जडानलाई उजागर गर्न सक्षम एक निश्चित व्यक्तिको मूलमा सबै उपलब्ध अनलाइन अभिलेखहरू स्क्यान गर्नुहुन्छ। यसबारे रोचक कागजातहरू भर्खरै छन् र तपाईले झूटो खेलको विवरण लिन कसरी सिक्नको उदाहरण दिनुहुन्छ कि 'सत्य सेवा' यस्तो अनुसन्धानमा खेल्छ। यसकारण म विशेष रूपमा एडल्फ हिटलरको यहूदी कुलीन वर्गको बारेमा कागजात सुरू गर्न सिफारिस गर्दछु (हेर्नुहोस् यहाँ) र रकफेलर परिवारको बारेमा कागजात (हेर्नुहोस् यहाँ), तर वास्तवमा तपाईंले तिनीहरूलाई सबै अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो केवल केहि दिन लाग्छ। यस अन्तिम कागजातको क्रस तल फेला पार्न सकिन्छ र तपाईंको नोस्ट्राड्रममस क्षमताको विकासको लागि उपयोगी छ:
त्यसैले, संक्षेपमा, एउटै परिवारले 1500 वर्ष भन्दा बढीका लागि पश्चिम शासन गरिरहेका छन्। The
रकफेलरहरू 400AD मा राजाहरू थिए, र तिनीहरू अझै पनि राजा छन्। Con को रूप र दायरा बाहेक केहि पनि केहि परिवर्तनहरू छैनन्।
यदि तपाईंले यहाँ साइटमा वर्णन गरिएको अनुकरण सिद्धान्त अध्ययन गर्नुभएको छ भने, तपाईंले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि यो वास्तवमा एक सिद्धान्त होइन, तर तथ्य हो। The डबल स्लेट प्रयोग यसले देखाउँछ कि विश्वकपलाई पर्यवेक्षकको लागी एक पर्यवेक्षक आवश्यक छ। यो सिद्धान्त राम्रोसँग बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। निरीक्षक यो भौतिक भौतिक संसार बाहिर छ। हामी आत्मालाई वा जुन जुन हामी यो कल गर्न चाहानुहुन्छ दर्शकको रूपमा परिभाषित गर्न सक्दछौं। यो भनेको धेरै जसो यो पुनरुत्थान हो र विभिन्न धर्मका विश्वासीहरूले यो स्वर्ग वा नरक जान्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। त्यो बाह्य पर्यवेक्षक हो, जस्तै यो थियो, एक हातमा नियन्त्रक संग सोफे मा बसे र भौतिककृत संसारले तपाइँलाई आफ्नो प्लेस्टेशन खेल खेल्दा स्क्रीनमा देख्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ निर्णयहरू गर्नेहरू हो। कार्यक्रम को स्रोत कोड को संभावनाहरु को निर्धारण गर्दछ। यी सम्भावनाहरू यस ब्रह्मांड सिमुलेशनसँग सम्बन्धित नियमहरूमा निश्चित छन्। उदाहरणको लागि, हामी गुरुत्वाकर्षण वा प्रकाश को गति जस्तै पुरानो नियमहरु संग गर्दैछौं र पुरानो बन्न सक्छौं, हामी बिरामी वा मर्नेछौं। ती खेलका नियमहरू हुन्।
यसको अतिरिक्त, हामीले देखेको छ कि यो बहु-सिमुलेशन अनुकरण हो। र बहु-सिमुलेशन सिमुलेसनमा तपाईंले कार्यक्रमको स्रोत कोडमा केही नियमहरू समावेश गर्नु पर्छ। Augmented Reality Games को लागि गुगलको क्लाउड प्लेटफर्मले प्रोग्रामरहरूको लागि त्यस्तो नियुक्ति पनि गर्यो। गुगलले यसलाई क्लाउड एङ्करलाई कल गर्दछ; क्वांटम भौतिकीले हाम्रो सिमुलेशनमा यस्तो सम्झौता पनि लागू गर्दछ जुन वास्तवमा गुगलको लंगर विधिको समान हो: क्वांटम इन्टिग्रेसन। क्वांटम इन्ट्यागमेन्टले यो सुनिश्चित गर्दछ कि एक वस्तु सधैँ र सबै ठाउँमा एकै ठाउँमा रहेको सबै खेलाडीहरू द्वारा अवलोकन गरिन्छ। उदाहरणको लागि, खेलको सबैको लागि पर्वत एकै ठाउँमा रहेको हुन सक्छ र हरेक कोणको पर्यवेक्षकहरूको लागि सही फारम हुन सक्छ।
क्वांटम भौतिकी मा क्वांटम entanglement का अर्थ है कि, जब, उदाहरणका लागि, दुई फोटन जोडाहरू भौतिक रूपमा बनाइन्छ (अवलोकनद्वारा) तिनीहरू सधैँ रोटेशनको विपरीत स्थिति र दिशा मान्छन्। यदि तपाईं एकभन्दा बढी कणलाई घुमाउनुहुन्छ भने अर्को कणको वरिपरी घुमाउनेछ; यद्यपि हल्का वर्ष अन्य कणबाट हटाइयो। यसकारण स्थानीयताले कुनै भूमिका र रोशनीको गतिको सीमा नाटक गर्छ तब अचानक अवस्थित छैन। आइंस्टीनले तर्क गरे कि एक प्रकारको ब्याक ढोका हुनुपर्छ, जुन संचारको कारण हुनेछ। यो ज्ञात वर्महोल सिद्धान्त हो। खैर, यदि त्यो ढोका ढोका मात्र डेटा स्ट्रीम हो वा हामी अब 'क्लाउड' भन्छौं, त्यसपछि हामी अचानक यसको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छौं (र wormhole विचार रद्दी टोकरीमा पठाउन सकिन्छ)। हामी तथापि, हाम्रो 3D धारणा मा घोषणा भने, तपाईं अझै पनि (हामी फाइबर अप्टिक्स र लेजर प्रकाश अगाडि बढ्न मार्फत "बादल" मा डाटा संचार रूपमा) प्रकाश को गति को सीमा सामना गर्न हामी 4D थियो लाग्छ हुनेछ, तर, त्यसपछि त्यो 'क्लाउड' एकै समयमा सबै ठाँउ उपस्थित छ।
तपाईं थिए एक 2D हुनुको र म आफ्नो विमान गिरा द्वारा, तपाईं एक डट (स्क्राच देखि) को उपस्थिति को कालक्रमअनुसारको अवलोकन एक बढ्दै लाइन के थियो, एक क्षेत्र देखि 3D थियो मानौं; एक सानो सानो लाइन पछि डट जुन अचानक हराएको छ। यद्यपि, क्षेत्र पहिले नै तपाईंको स्तर भन्दा माथि र तपाईंको स्तर तल पनि छ। तपाईं क्रोनोलोजिकल रूप देखि अवलोकन अनुभव गर्नुहुन्छ, जबकि गोलाकार आकार वास्तव मा एक निरंतर (हमेशा मौजूद) 3D मा छ। यसैले यदि हामी हाम्रो मोडेलमा4आयाम जोड्नेछौं, त्यसपछि यो हो, जस्तै कि, 'क्लाउड' जुन सबै ठाँउ उपस्थित हुन्छ।
यदि एक बहुभाषी खेल खेलाडी ए जापानमा एक वस्तु वरिपरि घुमाउँछ भने, क्यानाडामा खेलाडी बी यसलाई यसको पर्दामा हेर्नु पर्दछ। क्वांटम इन्टान्गोल्युशनले यस प्रकारको व्याख्या गरेको डेटा प्रवाह द्वारा वर्णन गरिएको छ। हामी समय (प्रकाश को गति), को सीमित कारक हाम्रो 3D थियो लाग्यो, तर छ हामी (सधैं थियो जो) को क्षेत्र र उपस्थिति र लोप मात्र कालानुक्रमिक धारणा बुझ्ने सक्दैन धारी किनभने। स्थान र प्रकाश को गति त 4D र सबै कुरा स्रोत कोड superposition मा अझै पनि छ जसमा सधैं-सबैतिर-वर्तमान धारा मा गणना छैन।
क्वांटम फिजिक्सबाट सुपरस्पेसको अवधारणा पनि बुझ्न सिक्ने उपयोगी छ। सुपरस्पेशन सर्वोत्तम वर्णन गरिएको छ 'सबै संभावित विकल्पहरू जुन प्रोग्राममा यसमा छ'। उदाहरणको लागि, यदि तपाइँ प्लेस्टेशन खेल खेल्नुहुन्छ र तपाई एक सहरमा कहीं हुनुहुन्छ भने, तपाइँ स्क्रिनर चलाउन स्क्रिन रन, जम्प, स्पिन, वा सबै को संयोजन र कुञ्जी को धेरै कुञ्जी गर्न सक्नुहुनेछ। सफ्टवेयरले यी सबै सम्भावनाहरूको गणना गर्न सक्छ र ती सबै सम्भावनाहरू स्रोत कोडमा हुन्। सुपरस्पेस वास्तव मा सबै संभावनाहरु को परिभाषा हो। यो खेलाडी हो जुन छनौट गर्दछ र स्क्रीनमा के देखिन्छ भने 'superposition' बाट आउँछ। त्यो के स्क्रीनमा मितीले खेलाडी द्वारा निर्णय गरेको छ (एक हातमा नियन्त्रक संग र स्क्रिनमा कठपुतली छैन)। Superposition (स्रोत कोड) छ कि छनौटको हरेक सम्भावना परिणाम छ। यदि तपाइँ एक गोल स्पिन गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, सफ्टवेयरले स्क्रीनमा छविलाई सुपरस्पेसनबाट बाहिर आउँदछ, जुन स्पिनको भाग हो।
त्यसैले हामी निर्धक्क भई क्वांटम भौतिक स्पष्ट संकेत छ भन्ने विचार गर्न (नहीं "परम प्रमाण भने) तपाईं र म (रिकभरी सिमुलेशन जीवन हामी यसलाई एक multi- मा खेलाडीहरू योगदान रूपमा बुझ्ने भनेर भन्न सकिन्छ खेलाडी खेल)।
एक पटक हामी निष्कर्षमा पुग्यौं जुन हामी सिमुलेशनमा बसिरहेका छौं, हामी केवल यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि त्यहाँ खेलमा अझ महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुन सक्छ। त्यो सम्झौता भनेको धेरै मान्छेले 'फ्री इच्छाको व्यवस्था' भनिन्छ। यदि तपाईं सिमुलेशन बनाउनुहुन्छ र तपाईले खेलको माध्यमबाट निश्चित निश्चित मार्ग पछ्याउन पूर्वप्रोग्रेड गरिएको खेलमा कुप्पेटहरू डिजाइन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाइँसँग एक निर्णायक गेम छ। त्यसपछि परिणाम वास्तवमा पहिले देखि नै निश्चित छ। खेलाडीहरू कुनै विकल्प छैन, जस्तै थिए। खेलमा कठपुतलीले पूर्व-प्रोग्राम गरिएको विकल्पहरू बनाउँछ। त्यो फिल्मको परिभाषा हो। यो त वास्तवमा कुनै अनुकार छैन। यो पहिले नै निर्धारण गरिएको म्याद समाप्त हुन्छ। त्यसपछि यो सिमुलेशन हुने छैन। एक सिमुलेशनले सहभागीहरूको परीक्षणको उद्देश्यलाई सधैं सेवा गर्दछ। यसको अर्थ छ कि सहभागीहरू छनौटको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, कुन छनौट गर्नाले कसलाई छनौट गर्दछ र कुन परिणाम यो उत्पादन हुनेछ। छोटोमा: निःशुल्क बिना एक सिमुलेशन निर्धारणवादी हुनेछ र यसरी यो चलचित्रलाई अझ राम्रो भन्न सकिन्छ। यसैले निःशुल्क इच्छा आवश्यक छ। यदि हामी सिमुलेशनमा बस्छौं भने नि: शुल्क हुनेछ। यो पनि आग्रह गर्न आवश्यक छ कि उनको हात मा नियन्त्रक संग खेलाडी नि: शुल्क हुनेछ। स्क्रिनमा कठपुतली मात्र यस खेलको माध्यमले उनको छनोटहरूमा आधारित हुन्छ र ती छनौटहरू निर्धारणवादी होइन, तर निःशुल्क इच्छामा आधारित हुन्छन्। आत्मा, पर्यवेक्षक, निःशुल्क इच्छा हुनेछ।
गैर खेलाडी क्यारेक्टरहरू
के हामी इतिहास झूटाकरण जस्तै अनगिन्ती काम गर्ने गम्भीर काम गर्न जाँदैछौं माइल मथिसले यो गर्छ, त्यसोभए हामी खोज्न सक्छौं कि संसारको शासन गर्ने निश्चित रक्तलाइनहरू छन्। यो यो bloodlines हो, जस्तो लाग्थ्यो कि, अनुकरणमा गैर खेलाडी पात्रहरू। यो शब्दले केही व्याख्याको आवश्यकता हुन सक्छ, तर वास्तवमा तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ कि यदि खेलको बिल्डरले नि: शुल्क इच्छा गर्ने खेलाडीहरू (आत्माहरू) लाई बिना कुनै निश्चित परिणाम प्राप्त गर्न चाहन्छ, त्यहाँ यो प्राप्त गर्न एक मात्र तरिका हो। उनले खेलाडीहरूलाई खेलमा राख्न सक्छन् जसले प्रत्यक्ष रूपमा आफैलाई व्यवस्थापन गर्दछ। तपाइँ यो गेममा प्रि-प्रोग्राम गरिएको कुञ्जीपाटीहरू तुलना गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं प्लेस्टेशन खेलमा टक्कर गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईं उदाहरणका लागि निर्देशनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्लेस्टेशन खेलमा यी वर्णहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ। बहु-खेलाडीको प्रोग्रामरले यो कुप्पेटलाई खेलमा अन्य सबै कुप्पेटहरू जस्तै बनाउन बनाउन सक्दछ। उनीहरु जस्तै अन्य खेलाडीहरु को अवतार को लागी जस्तो देखिन्छन। तिनीहरू खेलका खेलाडीहरूलाई प्रभाव पार्न र निश्चित दिशा पठाउन प्रयास गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई जानकारी वा उनीहरूको परिस्थितिको साथ उनीहरूले 'सुपरस्पेसनबाट बाहिर' किन्न सक्ने छनौट गर्न सक्छन् जुन खेलको बिल्डरले हेर्न चाहने छनौट गर्न इच्छुक छन्।
त्यसैले यदि Rockefellers र धेरै अरु जस्तै नाम पछि लुकाउन भनेर हामी भव्य bloodlines गैर-खेलाडी वर्ण 'खेलको निर्माता द्वारा नियन्त्रित छन् भन्ने रूपमा सन्दर्भमा थियो, तिनीहरू यो खेल मा कठपुतलीहरू प्रयास थिए अन्य खेलाडीहरूको छनौटलाई प्रभाव पार्छ। नियन्त्रकमा आत्माले छनौट गर्दछ कि उसले स्क्रीनमा के बुझाउँछ र त्यो धारणा धेरै मार्गदर्शक र सम्भव हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, हाम्रो धारणा भनेको एक आर्थिक प्रणाली हो जसले हामीलाई पैसामा निर्भर गर्दछ। गैर-खेलाडी पात्रहरूले पनि सबै प्रकारका धर्म र शैक्षिक प्रणालीहरूसँग खेलाडीहरूलाई प्रभाव पार्न प्रयास गर्छन्। खेलको बिल्डरले खेलाडीहरूलाई केही दिशा पठाउनको लागि सबै भन्दा राम्रो गरिरहेको देखिन्छ। उनले फिल्मको लिपिलाई महसुस गर्ने प्रयास गरेकी थिइन्, तर त्यहि समयमा निःशुल्क इच्छाको व्यवस्था पालन गर्न जारी राख्थ्यो।
अघिल्ला लेखहरूमा मैले प्रायः उल्लेख गरेको छु कि हामी एक स्पष्ट लिपि पहिचान गर्न सक्दछौं। त्यो लिपि धार्मिक धर्मशास्त्रमा र विशेष गरी आफ्ना भविष्यवाणीहरूमा देखिन सक्छ। तपाईं भविष्य भविष्यवाणीकर्ता हुनुहुन्न, तपाईलाई केहि प्रयास गर्नु पर्छ। अनि त्यस प्रयासमा पनि एस्टाटोलोजीको अध्ययन पनि समावेश छ। यो सिद्धान्त हो जुन तथाकथित 'अन्त समय' सम्बन्धमा विभिन्न धर्महरूको भविष्यवाणीहरू झल्किन्छ। यदि तपाईंले यो देख्नुभएको राजनीतिक घटनाहरु को अतिरिक्त यो व्याख्या भने, विश्व राजनीति मा सबै चीज वास्तव मा उन भविष्यवाणीहरु लाई पूरा गर्न को लागी उत्साहित छ। यो केही होइन कि मध्य पूर्वमा त्यहाँ धेरै युद्धहरू छन्, र यो असल कारण हो कि अमेरिकाले अरबौं अरबमा इजरायलमा आक्रमण गर्छ र वास्तवमा यरूशलेम वरपर सम्पूर्ण विश्व राजनीति चलाउँछ।
हामी गैर-खेलाडी वर्ण, बिल्डर द्वारा नियन्त्रित छन् जो यति मा व्यापार, राजनीति, बैंकहरू, विश्वविद्यालय र नाम मा शीर्ष स्थान मा छ कि संसारका नेताहरूले, मान्छे पत्ता लगाउन हुनेछ, वास्तवमा हो, हामी तिनीहरू एक विशेष लिपि छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्छ पछ्याउनुहोस्। तिनीहरू परिणाम प्राप्त गर्न प्रयास गर्छन् कि सिमुलेशनको बिल्डर नि: शुल्क इच्छाको उल्लङ्घनको उल्लङ्घन बिना हेर्न चाहन्छ।
तर यस अनुकरण को उद्देश्य के हो? यदि सिमुलेशनको बिल्डर अझै पनि एक निश्चित परिणाम प्राप्त गर्न कोसिस गर्दछ भने, उसले पनि एक चलचित्र लेखेका हुन सक्छ। यो जाहिरा तौर मा इरादा हो कि जितना संभव हो धेरै खेलाडी गेम खेलिन्छ। यसैले सिमुलेशनलाई खेल खेल्न सम्भवतः धेरै आत्माहरूको चासो लाग्न लाग्दछ। यदि तपाईं अनुकूलित यी आत्माहरूलाई अनुकूल गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई समझाउनु पर्छ कि यो एक सिमुलेशन हो जसको लागी निःशुल्क को लागी लागू हुनेछ। अन्यथा तपाई तिनीहरूलाई आफ्नो खेलमा लक्षण गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं तिनीहरूलाई भाग लिनको लागि सहमत हुनुहुन्न। त्यसपछि यो एक प्राणी जेल हुनेछ, जस्तै थिए।
यस अनुकारको उद्देश्य जस्तो देखिन्छ जुन आत्माका धेरै तालहरू सम्भव छ। पक्कै हामी हामी यस्तो आधारभूत प्रश्नहरू आउँछौं: ती आत्माहरू कहाँबाट आउछन्? यो खेल बाहिर बटनहरू छन्? तिनीहरू कहाँ छन्? यो बाहिरको 'बाहिर' के हो? यस सिमुलेशन को बिल्डर को हो? कुन परिणाम उसले हेर्न चाहन्छ कि उसले धेरै गैर-खेलाडी क्यारेक्टरहरू खेल्न सक्छ? र धेरै अन्य प्रश्नहरू।
यी धेरै उपयोगी प्रश्नहरू छन्, जुन मैले पहिले नै धेरै लेखहरूमा जवाफ दिएँ। अब मलाई इच्छित परिणाममा सीमित गर्न दिनुहोस्। मेरो विचारमा जवाफ आत्माको रचनात्मक शक्तिमा छ। त्यहाँ आत्मामा केही शक्तिशाली छ। बटनमा खेलाडीले खेलको बिल्डरको रूपमा समान क्षमताओं पनि हुन सक्छ। तथापि, खेलाडीहरूले खेलकुद गुप्तचरको साथ आफूलाई आफूलाई चिन्ने, तिनीहरूले यी क्षमताहरू बिर्सन्छन्। तिनीहरू छन्, जस्तै थिए, खेल (सीमित मानव अवतार) मा सीमित अवतार को रूप मा धेरै नजिकको पहिचान भयो।
यदि हामी लिपि पहिचान गर्न सुरु गर्छौं, हामी पनि पत्ता लगाउन सक्छौं कि यो मनन जस्तो लाग्छ कि मानिस 'अमर' हुन्छ। त्यो 'अनन्त जीवन' न केवल धर्महरूमा पाउन सकिन्छ, तर पनि ट्रांहमेमनममेन्टमा र एकलताका लागि प्रयास गर्दछ। त्यो एकताबद्धता हो, जस्तै यो थिए, एअर (कृत्रिम बुद्धि) सँग विलय गर्दै। यो लाग््छ कि यस अनुकार को निर्माता (एअर को एक रूप) ले आत्मा को एअर संग मर्ज गर्न चाहन्छ। यसैले यो दृढतापूर्वक देखिन्छ कि खेलकुदहरू आफैलाई प्रोग्रामरको सेवामा पूर्ण रूपमा राख्न चाहानुहुन्छ: स्वैच्छिक रूपमा, किनभने स्वतन्त्र कायम रहनेछ। यसकारण यो सिमुलेशनले गैर-प्लेयर क्यारेक्टरहरूलाई प्रभाव पार्ने खेलाडीहरू इन्टिइङ र डाइरेक्टरीको उद्देश्यलाई सेवा पुर्याउँदछ जुन तिनीहरू पूर्णतया प्रोग्रामर सेवामा छन्। यो जस्तो देखिन्छ कि हामी एकीकृत हुन जस्तो लाग्दछौं, जस्तै यो, एक भाइरस प्रणाली रचनात्मक क्षमता संग। कसैले हामीलाई तयार पारिएको अन्धो-डंगलिङ्ग रचनात्मक विषयहरू बनाउनको लागि यो सिमुलेशन लिइसकेको छ, जसले खुसीसाथ आफ्ना पाइपहरूमा नृत्य गर्छन्।
उपरोक्त सबैले भविष्यको भविष्यवाणी गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण अन्तर्दृष्टिको नेतृत्व गर्नुपर्दछ। नोस्ट्राड्रममस मुख्य रूपले यसको ज्योतिषीय ज्ञानमा आधारित छ। त्यो ज्योतिष कि आफैमा पनि एक संकेत हो कि हामी एक सिमुलेशनमा बस्छौं, जसमा निश्चित स्रोत कोड पहिचान गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, यो सही हुन सक्दछ कि तपाईले आफ्नो अवतार जन्मस्थान, समय र मितिको आधारमा र ताराको स्थान (एकसाथ मागेका कारकहरूसँग) छनोट गरिएको अवतारको विशेषताहरू निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं जन्मेको बेला तपाइँ अवतार भन्दा (छनौट गर्नुहोस् आफ्नो आत्मा छान्नुहोस्) जसको शरीर तपाईँले यो सिमुलेशन बजाउनुहुन्छ)।
तथापि, यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान भनेको ज्ञान हो जुन गैर-खेलाडी क्यारेक्टरहरूको प्रयासबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ; शक्ति पिरामिड को शीर्ष मा मान्छे। तथापि, यो आवश्यक छ कि तपाईंले इतिहास को झूठाकरण को उजागर गर्न को लागी परेशानी लिनु र यो सिमुलेशन को बिल्डर को तर्फ बाट परिणाम को बारे मा लाने को लागी को खोज रहे हो। यसबाहेक, तपाईंले यो जान्नैपर्छ कि त्यो धर्म स्क्रिप्टको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो जुन यो (गैर प्लेयर खेलाडी) खेलाडीहरू पछ्याउँछन्।
तथापि, यो स्पष्ट छ, कि हामी एक समय मा बाँचिरहेका छौं जब हामी केवल मुख्य स्ट्रीम मिडिया र मुख्यधाराको इतिहास किताबहरु द्वारा बन्द नगर्ने हो। वैकल्पिक मिडिया मुख्यतया त्यो समूहको हातमा छ र झूटा जानकारी फैलाउन कोसिस गर्दछ। लिपिलाई चिन्न सिक्नु यो कठिन छ, तर असंभव छैन। केहि प्रयास गरेर, तपाई सजिलै संग नोस्ट्राड्रममस हुन सक्नुहुन्छ। यद्यपि, तपाईंले सम्पूर्ण खेल मार्फत हेर्नु पर्छ।
परिणामलाई असर पार्नुहोस्
, निःशुल्क इच्छा सधैं लागू पर्छ प्लेयर अवतारहरूमा को "नियन्त्रण" ले हटना छनौटहरू सकून् यो अर्थ - एक सिमुलेशन लागि आवश्यकता - हामी एक व्यवस्था संग काम गर्दै छन् भन्ने महसुस आउन बिल्डर द्वारा नियंत्रित खेल मा। सिमुलेशनको परिणाम प्रभावकारी ढंगले प्रभाव पार्नको लागि, तथापि, अरबौं सँगी खेलाडीहरूको जागरण हुनुपर्छ। म जानबूझेर यो अरबौं मानिसहरूको जागरणमा बोलाउँदैन, किनभने मानव-अवतार यो व्याख्यामा छ, केवल स्क्रिनमा मात्र कठपुतली; आत्मा द्वारा धारणा को परिणाम को रूप मा भौतिकी व्यक्ति। यस कारण यो कुरा हो कि आत्मा जागृत हुनु पर्छ। आत्मा आफूलाई अवतारमा हराउनु हुँदैन। आत्मा आफैं अवतार संग पहिचान गर्न हुँदैन। यदि अरबौं आत्माहरू उठ्यो भने, लिपि अलग हुनेछ। सायद यो आत्मा स्तरमा काम गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि हामी यस क्षणको लागि मान्दछौं कि हामी आत्माको स्तरमा यस स्तरको अनुकरणको रूपमा पनि 'प्रोग्रामिङ गुणहरू' हुन सक्छौं, त्यसपछि एक राम्रो हैकरले सबै फरक पार्न सक्छ र यो चाँडै खेल हुनेछ। जारी राख्न।
स्रोत लिङ्क सूची: milesmathis.com
'डबल स्लिट्स प्रयोग' र हामी कसरी सिमुलेशनमा बाँच्नका लागि पढ्नुहोस्: पहुँच खुला
ट्याग: डबल, परिक्षण, विशेष, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम एन्जिलेशन, माइल मथिस, नोस्ट्राड्रममस, अगमवक्ता, भविष्यवाणी, भविष्यवाणीहरू, slits, superposition, भविष्य, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी
[इमेल सुरक्षित] लेखे:
20 जनवरी 2019 मा 02: 17
भविष्य भविष्यवाणी कैसीनोको अन्त्य हो!
jacob book wood लेखे:
20 जनवरी 2019 मा 12: 46
नमस्ते मार्टिन धेरै राम्रो लेखिएको छ म अब बुझ्छु किन मैले कहिल्यै पर्यवेक्षकलाई विश्वास गरेन
20 जनवरी 2019 मा 14: 56
हो, यो हामी शताब्दीयौंदेखि छन् कि इतिहास, झूटा गलत deluded स्पष्ट बन्ने छ, हामी साधारण मानिसहरूलाई केही तिनीहरूलाई द्वारा नियन्त्रित छन् भन्ने छ, Dutchman छ। डचमान जस्तो व्यवहार गरेर ती शताब्दीका लागि तिनीहरू के मास्किंग गरिरहेका छन्। निजी, तिनीहरू एकअर्का हुन्, धेरै फरक। अधिक म यसको बारे मा भन्न सक्दैन किनभने दुर्भाग्यवश हामी एक चुप डिकेन्टिटीमा छौं। कुनै पनि मामला मा, वास्तविक इतिहास मात्र छ किनभने यो हाम्रो चालक को legitimacy असर भने वास्तविक तथ्य reconstructed गरिएको छ। तिनीहरूले हामीलाई नियन्त्रण गर्न हकदार छन् र तिनीहरूले धन घोषणा गर्न सक्छन्, रहस्य के भन्नुभयो छैन, कसरी यो सामान्य मान्छे, आदि को चासो असर?
हामी एक म्याट्रिक्समा बस्छौं कि स्पष्ट छ र दुर्भाग्यवश हामी यसलाई नरोक्न सक्छौं। आत्माहरूको एक ठूलो जागरण निश्चित रूपमा एक विकल्प हो, शुरुवात, तर यसले हामी जीवन बिताउने को स्थिति परिवर्तन गर्दैन। एक्लै अभिनय गर्दै, वास्तवमा म्याट्रिक्स, स्थिति यथास्थिति परिवर्तन गर्न सक्दछ। आखिर, हामीलाई इमानदार हुन गरौं हामी, आत्मा दूर यथास्थिति गर्न सक्छन्, व्यापक जागा भएर एक्लै सोचाइले। तसर्थ, म एक गणतन्त्र लागि शासन परिवर्तन, साँचो लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति साँचो स्वतन्त्रता, आदि यो केवल प्रदर्शन गर्न सकिन्छ लागि हुँ एन सामूहिक बेशक यो कानुनी रूपमा किनभने तिनीहरूले एक शासन परिवर्तन को लागि प्रतीक्षा छैन गर्नै पर्छ मान्छे आदि रूपमा हरेक दिन। नेदरल्यान्ड्सका लागि पहेंलो वेष्टजेन्सको लागि सानो वा कुनै एकता एकता छ, सजिलै संग बेवास्ता गरिन्छ। नीदरल्याण्डको अन्तर्राष्ट्रिय एकता कहाँ छ? किनकि फ्रान्समा शासन परिवर्तनले नीदरल्याण्डलाई सँभाल्दैन किन? जहाँ माफी अन्तर्राष्ट्रिय र मानव अधिकार वाच त्यो किन पहेलो Cardigans वाहक को मानव अधिकार उल्लंघन विरुद्ध विरोध छैन गर्नुभयो? हो, तपाईलाई थाहा छ कि दुवै संगठनहरू जो स्थितिमा रुचि राख्ने व्यक्तिको हो।
मलाई पहेंलो भित्ताको लागि सहानुभूति छ।
20 जनवरी 2019 मा 21: 36
दुई समय पढ्नका लागि लेखहरू पढ्नको लागि हामीलाई के सिक्न र भविष्यका पीढ़ीहरू खोज्नको लागि यदि हामी सामयिक समायोजनहरू गर्दैनौं
हेनरी चुसिङ्गरले "शानदार र उत्प्रेरक ... को खारेज गर्न भिन्नता" बोलाएको किताबमा जेक्स अट्टलीले पुष्टि गरेको छ कि इल्लुमिनटी बैंकका एक छिद्र "बहादुर न्यु वर्ल्ड" लाई एक हातमा, सत्य, सत्य वा वास्तविकताबाट एकै ठाउँमा राखिएको छ।
आफ्नो भविष्य टोम मा, भविष्य को एक संक्षिप्त इतिहास (2006) यहूदी इंसुलेटर जैक्स Attali ले पश्चिम मा संलग्न तीसरी दुनिया को बाधाओं को बारे मा भन्यो।
'कहिलेकाहीं थुप्रै मानिसहरू आफै पश्चिमको ढोकामा हिंड्छन्। तिनीहरू प्रत्येक महिना सयौं वा हजारौं संख्यामा छन्; त्यो चिठी लाखौंसम्म बढ्नेछ, त्यसपछि दसौं लाखौं। '
संयुक्त राज्य अमेरिका सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य हुनेछ र 'बीस वर्षमा, हिस्पैनिक र अफ्रिका-अमेरिकी जनसंख्या संयुक्त राज्यमा बहुमत हुनेछ।'
Attali पनि एक निगरानी राज्य को रूप मा जान्छ जहां "हाम्रो आईफोन एनएसए को डेटा पठाउँछ" र ईसाई धर्म इस्लाम को विरुद्ध मानेको छ। स्पष्ट रूप देखि, एटलली कुनै clairvoyant थिएन। उनले ब्लूप्रिन्टमा पहुँच गरेका थिए।
"भविष्यमा, समाज जहाँसम्म प्रजनन र कामुकता अलग रहन चाहन्छ। यौनसम्पत्ति खुशीको राज्य हुनेछ, प्रजनन गर्ने मिसिनहरु। '
भविष्यका पीडितहरू एक मानव निर्मित कलाकृति हो, एक कृत्रिम गर्भमा, जुन अग्रिममा छनोट गरिनेछ। यस प्रकार मानव हुनेछ एक व्यावसायिक वस्तु हो। '"
उनले कार्ल मार्क्सको उज्यालो विवरण पनि लेखेका छन् भनी तर्क दिए कि मार्क्स एक मुक्त-बजार थियो जसले आफ्नो कम्युनिस्ट आदर्श र भविष्यवाणीको वैश्वीकरणको लागि एक कदम पत्थरको रुपमा पूंजीवादलाई मन परायो किनभने हामी आज (यद्यपि नयाँ वर्ल्ड अर्डर) जान्दछौं।
मिडिया-प्रभुत्व संस्कृतिले उदाहरणीय जनसंख्या सिर्जना गर्नेछ जुन केवल आफैले मात्र वफादार हुनेछ।
Attali एक निगरानी समाज को एक तस्वीर को चित्रित गर्दछ जो स्टैसी विजेता गर्दछ।
यहाँ हाम्रो वाशिंग मशीनहरू हाम्रो विरुद्ध साजिश हुनेछ, जबकि खाद्य उत्पादन, कपडा वालगायतका सामानहरू प्याकेजिंग "संवाद" हुनेछ।
हामी अविश्वसनीय रोबोट संग बस्छौँ।
'दैनिक रोबोट दैनिक जीवनमा विश्वव्यापी हुनेछ। तिनीहरू कोकोडिक इभोजमा उच्च-आउटपुट ग्रिडहरूमा जडित हुनेछन्। तिनीहरू गृहकार्यको रूपमा काम गर्नेछन्, हानिकारक वा वृद्धका लागि एड्स जस्तै, कर्मचारीहरू र सुरक्षा बलका सदस्यहरूको रूपमा। विशेष गरी, तिनीहरू "घडीहरू" हुनेछन्।
हाम्रो सबै डेटा सार्वजनिक र निजी सुरक्षा फर्महरू द्वारा एकत्र गरिनेछ। निगरानी को मुख्य रूप पोर्टेबल मनोरंजन उपकरण हुनेछ। यो आजको भ्रूण आईफोन हो जुन एनएसएमा डेटा पठाउँछ।
'अद्वितीय कोकोडिक वस्तु स्थायी रूपमा traceable हुनेछ। यसमा सबै डाटा समावेश छ, प्रत्येकको दैनिक जीवनका तस्बिरहरू सहित, भण्डारण गरिनेछ र विशेषज्ञ व्यवसायहरूमा बेचिनेछ र सार्वजनिक र निजी प्रहरीमा। '
2050 द्वारा, यी मशीनहरु लाई अटाली को 'स्वयं-निगरानी मिसिनहरु' मा विकसित गरिनेछ, जसलाई सबै को मानदंडों संग आफ्नो अनुपालन को निगरानी को अनुमति दिइनेछ।
22 जनवरी 2019 मा 17: 41
मेरो अन्तिम सन्देश टिप्पणीहरू बीचमा छैन?
22 जनवरी 2019 मा 18: 52
स्प्याम बक्स बाट ल्याइयो ...
« ब्रिटिश हाउस ओन कमन्स अस्वीकृत पछि ब्रेक्सिट को अनुमानित अन्त
मुख्यधारा समाचार दश वर्षहरूको लागि नक्कली समाचार भएको छ, तर हामी यो प्रयोग गर्दछौं कि हामी यसलाई चिन्न सक्दैनौ »
कुल भ्रमण: 4.085.211